Ukuxilongwa Kwe-Asthma - Iplatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
Ukuxilongwa Kwe-AsthmaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-07-01T13:32:42+02:00
Asikho isivivinyo esisodwa sokuxilongwa kwesifo somoya. Udokotela wakho uzo:
buza ngempilo ejwayelekile, kufaka phakathi ukuthi ngabe wena (noma amanye amalungu omndeni) unezifo ezifana ne-eczema noma i-hay fever njll.
zihlole ngokomzimba (isb. lalela isifuba)
cabanga ngezinye izimbangela zezimpawu
hlela ukuhlolwa kwe-spirometry (kwabantu abadala nezingane ezineminyaka engu-6 nangaphezulu).
Asebenza kahle kanjani amaphaphu (umsebenzi wamaphaphu) kusetshenziswa i-spirometer. Ushaya ishubhu ngamandla nangendlela ongakwazi ngayo. I-spirometer ilinganisa inani lomoya odudulwe ngethumbu, kanye namandla wamaphaphu neminye imingcele.
Ukuhamba komoya kungahluka nakubantu abaphilile (isb. Uma othile enomkhuhlane amaphaphu akhe kungenzeka angasebenzi njengokujwayelekile). Kepha abantu abane-asthma banomehluko omkhulu kakhulu kunabantu abaphilile phakathi kwamaphaphu abo asebenza kahle kakhulu futhi kabi kakhulu.
Iningi lezingane ezineminyaka engaphezu kwengu-6 ubudala zingenza lokhu kuhlolwa kwesifuba somoya. Uma wena noma ingane yakho unomkhuhlane noma umkhuhlane, i-spirometry kufanele iphindwe ngokuhamba kwesikhathi lapho usuphilile.
Udokotela uzobe ebheka izimpawu zezimo ezivame ukuhambisana nesifuba somoya njenge-rhinitis (ukuvuvukala kwempumulo), i-sinusitis (ukuvuvukala kwamasinki), ama-nasp polyps (amasaka agcwele amafinyila emakhaleni), eczema noma dermatitis (isikhumba ukucasuka).
Kwesinye isikhathi udokotela udinga ukwenza ezinye izivivinyo:
Ukuhlolwa kokungezwani komzimba, kungaba isikhumba noma igazi
Isivivinyo sokubona ukuthi izindiza zakho zithinta kanjani ukuzivocavoca umzimba
Ukuhlolwa kwezinye izimo, njengesifo se-reflux se-gastroesophageal (GERD) noma ukuvimbela ukuphefumula kokulala
Ukuhlolwa kwesifo sesono
I-x-ray yesifuba noma i-electrocardiogram ukuhlola izimpawu zesifo esihlukile samaphaphu noma senhliziyo
Isivivinyo se-nitric oxide (FeNO) esikhishwe ukukala ukuvuvukala kwamaphaphu
Udokotela uzobheka izindlebe zakho, amehlo, impumulo, umphimbo, isikhumba, isifuba namaphaphu. Ukukhipha ezinye izimo ezingaba khona - njengesifo sokuphefumula noma isifo se-pulmonary esingapheliyo (COPD) - Udokotela wakho uzokubuza imibuzo mayelana nezimpawu nezimpawu zakho nangezinye izinkinga zempilo. Lokhu kuhlolwa kungafaka ukuhlolwa komsebenzi wamaphaphu ukuthola ukuthi uwukhipha kahle kangakanani umoya ovela emaphashini akho. Ungadinga futhi i-X-ray yamaphaphu akho noma amasinusi.
Amaphaphu Umsebenzi Test
Ukuze ubone ukuthi amaphaphu akho asebenza kahle kangakanani, ungakanani umoya ongena uphume nalapho uphefumula.
Lesi isivivinyo sokuqinisekisa ufuba. Uzodonsa umoya kakhulu bese uphefumulela ngaphandle ngamandla kulomlomo oxhumeke kudivayisi, obizwa i-spirometer. Lokhu kuhlolwa kulinganisela ukuncipha kwamashubhu akho e-bronchial ngokubheka ukuthi ungakhipha umoya ongakanani ngemuva kokuphefumula okujulile nokuthi ungaphuma ngokushesha okungakanani.
A ukuphakama kwemitha yokugeleza iyidivayisi elula, ephathwa ngesandla ephawula ukuthi ungaphefumula kanzima kangakanani. Ngesikhathi sokuhlolwa uphefumulela ngaphakathi ngokujulile ngangokunokwenzeka bese ushaya kudivayisi kanzima futhi ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka. Ukufundwa kokugeleza kwenani eliphansi kunokujwayelekile kuyisibonakaliso sokuthi amaphaphu akho kungenzeka ukuthi awasebenzi futhi nokuthi i-asthma yakho kungenzeka iye iba yimbi kakhulu. Uma uthola ukuthi unesifo somoya, ungasebenzisa imitha yokugeleza okuphezulu ekhaya ukusiza ukulandelela isimo sakho.
Ukuhlolwa kokusebenza kwamaphaphu kuvame ukwenziwa ngaphambi nangemva kokuthatha umuthi obizwa nge-bronchodilator, njenge-salbutamol / albuterol, ukuvula izindlela zakho zomoya (ukuhlolwa kokubuyela emuva). Uma umsebenzi wakho wamaphaphu uthuthuka ngemuva kokuhogela i-bronchodilator, kungenzeka ukuthi une-asthma.
Isifuba X-ray noma CT ukuskena kwamaphaphu akho kungakhomba ukungajwayelekile noma izifo ezingadala noma zenze izinkinga zokuphefumula (isib. ukutheleleka).
Ukuhlolwa kwe-Nitric oxide Exhaled - FeNO
Sonke sikhipha i-nitric oxide (NO) encane. Kodwa i-nitric oxide eningi kakhulu iyinkomba yokuvuvukala kwamaphaphu, isimo esingaphansi kwesifuba somoya. Ukukala amazinga e-nitric oxide ekuphefumuleni kwakho (i-FeNO, noma i-nitric oxide ekhishwe ngamaqhezu) kungasiza ekuhloleni nasekuqapheni i-asthma. Ukuhlolwa okungekho emthethweni kufaka ukuphefumulela emshinini othola amazinga e-FeNO; ingenziwa kalula yiziguli zayo yonke iminyaka.
I-Methacholine, uma ihogelwe, izodala ukuminyana komoya wakho. Uma usabela ku-methacholine, kungenzeka ube nesifuba somoya. Lokhu kuhlolwa kungasetshenziswa noma ngabe ukuhlolwa kwakho kokuqala komsebenzi wamaphaphu kujwayelekile.
Ingabe isivivinyo esivusa inkanuko sokuzivocavoca nesifuba somoya esibangelwa amakhaza. Kulezi zivivinyo, ukuvinjelwa komoya wakho ngaphambi nangemva kokwenza umsebenzi onamandla womzimba noma ukuphefumula kaningana komoya obandayo kuyalinganiswa.
Ukuhlolwa kokungezwani komzimba kungenziwa ngokuhlolwa kwesikhumba noma ukuhlolwa kwegazi. Ukuhlolwa kokungezwani komzimba kungakhomba izinhlobo eziningi zomzimba. Uma kutholakala izimbangela ezibalulekile zokungezwani komzimba, lokhu kungaholela ekunconyweni kwe-allergen immunotherapy.